रिभ्यूः फोटोका लागि उपयुक्त बजेट स्मार्टफोन 'जियोनी पी ५ डब्लू' (भिडियो रिभ्यूसहित) - Technology Khabar
ह्वाट्सएपको नयाँ नियम, अब एउटा मेसेज ५ जनालाई मात्र फरवार्ड गर्न सकिने
अमेजन वेब सर्भिसले डेभलपरका लागि ब्याकअप सेवा दिने
शाओमीले ल्यायो गेमिङ्ग एप ‘सर्भाइवल गेम’, पबजी गेमलाई टक्कर दिने
रिभ्यूः फोटोका लागि उपयुक्त बजेट स्मार्टफोन ‘जियोनी पी ५ डब्लू’ (भिडियो रिभ्यूसहित)
टेक्नोलोजी खबर २१ बैशाख २०७३, मंगलवार १५:२२
काठमाडौं, २१ वैशाख । जियोनीले नेपाली बजारमा ल्याएको बजेट स्मार्टफोन हो जीयोनी पी ५ डब्लू (Gionee P5W) । जियोनीको यो स्मार्टफोनमा ५ इन्चको आईपीएस एचडी डिस्प्ले राखिएको छ, जसको पिक्चर रिजोल्यूशन ७२०x१२८० पिक्सेल रहेको छ । यो फोन हेर्दा निकै स्टायलिस र अाकर्षक छ । हातमा समाउँदा स्लीम फोन भएको अनुभव दिन्छ भने गाेजीमा पनि सजिलै अटाउँछ ।
जियोनीको यो स्मार्टफोनमा १.३ गीगाहर्जको क्वाड कोर मिडियाटेक कोर्टेक्स ए५३ प्रोसेसर राखिएको छ भने यसमा २ जीबीको र्याम रहेको छ । जियोनी पी ५ डब्लू स्मार्टफोनमा १६ जीबीको स्टोरेज राखिएको छ, जसलाई माइक्रो एसडी कार्डबाट बढाएर १२८ जीबीसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
जियोनीको यो फोनमा ५ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा रहेको छ भने यसमा एलईडी फ्ल्याश पनि राखिएको छ । त्यस्तै सेल्फीका लागि यो फोनमा २ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ । यसको क्यामरामा फेस डिटेक्सन, ब्यूटी शट, फील्टर, एचडी रेकर्ड, पानोरामालगायतका फीचरहरु छन भने यसको रियर क्यामराले ७२० पिक्सेलको एचडी भिडियो रेकर्डिंग गर्दछ ।
जियोनी पी ५ डब्लूबाट हामीले केहि तस्विरहरु खिचेका छौं, जुन अाकर्षक देखिन्छन् । यसको क्यामरा क्वालिटी बजेट फोनको जस्तो नभई मिड रेन्जको स्मार्टफोनको जस्तै छ । तर यसको क्यामरा जूम क्वालिटी निकै कमजोर रहेको छ ।
त्यसैगरी यो फोनले खिचीएका भिडियोको गुणस्तर पनि ठिकै किसिमको छ ।
जियोनी पी ५ डब्लू स्मार्टफोनमा लीआयोन २,००० एमएएचको ब्याट्री क्षमता रहेको छ ।
ड्यूल सिम सपोर्ट गर्ने यो फोनमा कनेक्टिभिटीका लागि वाईफाई, ब्लूटूथ, थ्रीजी सपोर्ट छ भने सेक्यूरिटीमा फेस अनलक, तथा गेस्ट मोड फीचर छ । यो फोनमा ओटिजी फीचर पनि रहेको छ, जसको माध्यमबाट अर्को फोनबाट अथवा कुनैपनि पेन ड्राइभबाट विभिन्न जानकारीहरु आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।
एन्ड्रोयडको ललीपप ५.१ भर्सनको अपरेटिंग सिस्टममा आधारित यो स्मार्टफोनमा जियोनीको आफ्नै अमिगो ३.१ इन्टरफेस प्रयोग गरिएको छ । बजारमा यो फोन ह्वाइट, ब्लू, ब्ल्याक एण्ड गोल्ड कलरमा उपलब्ध रहेको छ ।
जियोनीको बजेट रेन्ज फोनको रुपमा बजारमा आएको यो स्मार्टफोन निकै स्टायलिस देखिन्छ भने यसमा भएको साउण्ड क्वालिटी पनि राम्रो रहेको छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य कम्पनीले रु ११,९९९ तोकेको छ ।
यसको रियर तथा फ्रन्ट क्यामराले आकर्षक फोटोहरु खिच्न सकिन्छ । बजेट फोन भएपनि यसको क्यामरा गुणस्तर भने निकै राम्रो छ । क्यामराको लागि बजेट फोनको रुपमा बजारमा आएका अन्य फोनहरुमध्ये यसलाई उत्कृष्ट फोन भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसको लूक्स पनि निकै आकर्षक रहेको छ । यो फोन बोक्दा निकै आकर्षक र हलुका महसुस हुन्छ भने यसको कार्य क्षमता पनि निकै दक्ष रहेको छ । अधिक र्याम भएको हुँदा कार्य क्षमतामा कुनै समस्या आउँदैन् ।
जियोनी पी ५ डब्लूको भिडियो रिभ्यू-
तर जियोनी पी ५ डब्लू फोनको कमजोरी भनेको यसको ब्याट्री ब्याकअप हो । यसमा निकै कम क्षमताको ब्याट्री राखिएको हुँदा अधिक क्षमताका एप्स तथा गेमखेल्दा ब्याट्रीले सपोर्ट गर्दैछ । यसको ब्याट्री छिटै सकिने समस्या अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यो फोनमा मल्टी टास्किंग गर्दा र अधिक क्षमताका एप्स चलाउँदा फोन अधिक तात्ने गर्दछ भने बेला बेलामा अनावश्यक रुपमा ह्यांग हुने समस्या देखिन्छ ।
समग्रमा भन्दा बजेट फोनको रुपमा रहेको जियोनीको पी ५ डब्लू स्मार्टफोन क्यामरा र फोटोमा सोख राख्ने व्यक्तिहरुका लागि निकै आकर्षक फोनको रुपमा खरिद गर्न सकिन्छ । तर गेम खेल्न वा मल्टि टास्किंगका लागि यो स्मार्टफोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने एक पटक विचार गर्नु नै ठिक होला ।
Budget Phone Budget Smartphone Gionee P5W	२१ बैशाख २०७३, मंगलवार १५:२२
Previous: राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाईयो, नेपाल सर्टको स्थापना
Next: सामसुंग ग्यालेक्सी नोट सिक्समा यूएसबी टाइप सी पोर्ट, ६ जीबी र्याम पनि हुने
७ माघ २०७५, सोमबार १५:२९
७ माघ २०७५, सोमबार १२:२८
माइक्रोसफ्टले विण्डोज डिभाइस प्रयोगकर्तालाई भन्यो- एन्ड्रोयड वा आइओएस चलाऊ
टिसीएल ब्राण्डले सिईएस २०१९ मा पायो ६ वटा अवार्ड
उपत्यकामा २१ हजार बढि सिसी क्यामरा चाहिने
टेस्लाले १४ हजार मोडल एस गाडी चीनमा ‘रिकल’ गर्यो, एयरब्यागमा समस्या
७७ करोड ईमेलआईडी र २ करोड पासवर्ड लीक, कतै तपाईँको ईमेल पनि पर्यो की ?
4G 5G Apple Apple inc. Apple iPhone7Can Federation CG Facebook Gionee Google Huawei ims iPhone7iPhone 8 Lalitpur Mobile Complex LG Ncell Nepal Telecom Nokia NTC Oneplus Oppo samsung Samsung Galaxy Note7Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S8 Teletalk Pvt. Ltd. Twitter WhatsApp Xiaomi आइफोन इन्टरनेट एनसेल एप्पल ओपो ओपो नेपाल गूगल नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण फेसबुक शाओमी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामसंग ह्वावे
७ माघ २०७५, सोमबार १८:१६
७ माघ २०७५, सोमबार १३:३३
६ माघ २०७५, आईतवार १९:४५
६ माघ २०७५, आईतवार १८:१८
६ माघ २०७५, आईतवार १८:०२